မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: မေတ္တာ+သံယောဇဉ် = အချစ်...
မေတ္တာ+သံယောဇဉ် = အချစ်... အဲဒါ မှန်သလားမမှန်သလား ဘယ်သီအိုရီမှာ ရှာရပ ??? ဆိုပြီး facebook မှာ ရေးမိတယ်။ဦးYMT က ကွန့်မန့်မှာ လာရေးပေးသွားတယ်။မေတ္တာ (ဣ)ချစ်ခြင်း။ ချစ်မြတ်နိုးခြင်း။(f.) amity; benevolence.Friendliness, friendly feeling, good will, kindness, love, charityသံယောဇန (န) (သံ√ယုဇ်+ယု)... အနှောင်အဖွဲ့။ ဝဋ်ဆင်းရဲ၌ ယှဉ်တတ်သော တရား။ ဝဋ်ဆင်းရဲ၌ ဖွဲ့ချည်တတ်သော ကြိုး။ သံယောဇဉ်။သံယောဇဉ် ၁၀ ပါးကား (၁) သက္ကာယဒိဋ္ဌိ၊ (၂) ဝိစိကိစ္ဆာ (၃) သီလဗ္ဗတပရာမာသ (၄) ကာမစ္ဆန္ဒ (၅) ဗျာပါဒ (၆) ရူပရာဂ (၇) အရူပရာဂ (၈) မာန (၉)ဥဒ္ဓစ္စ (၁၀) အဝိဇ္ဇာ။သညောဇန - လည်းကြည့်။(nt.) connection; fettering.Bond, attachmentအဲဒါဆိုရင် အချစ်က မေတ္တာထဲမှာပါပီးသား... သံယောဇဉ်ကို အပြင်ထုတ်.. ( မေတ္တာ=အချစ် ) - သံယောဇဉ် = robot အဲဂလိုလားအယ်... သိတော့ဘူး ရှုပ်ကုန်ပီ eek :(ပါဠိတွေဘာတွေ ကျမ သိပ်မသိဘူး။မေတ္တာဆိုတာ အေးမြစွာနဲ့ ၅၂၈ မောင်နှမလို ချစ်ခင်တာလို့ကနဦးယူဆပြီး အကြင်သူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဖြူစင်စွာ ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး အနေကြာလာတော့ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ပိုမိုနားလည်လို့ တွယ်တာမိတဲ့ သံယောဇဉ်တွေကြောင့် အကြောင်းစုံမက်လို့ ပေါင်းစုံမဖက်ဖြစ်သေးတောင် ကြင်နာယုယချင်တဲ့စိတ် အပြန်အလှန်ဖေးမကူညီမှုတွေနဲ့ စောင့်ရှောက်ရင်း တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်တွဲလို့ တစ်မိုးအောက်နှစ်ယောက် နှလုံးသားတွေနဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ခိုလှုံရာ အိမ်လေးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အချစ်ဆီကို ရှေးရှုသွားသလားလို့ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် အတွေးနယ်ချဲ့မိတာပါ။စိတ်ဝင်စားသူများ ဆက်လက် အတွေးနယ်ချဲ့ကြစေသတည်း။ကျမတော့ ဆက်မတွေးတော့ဘူး ရူးမစိုးလို့...